Eli nqaku lihlola imiba yeenkokheli zowesifazana, kunye neengxaki zobunkokheli. Yintoni abaphathi abajongene nayo? Ingquzulwano neqela, ukuxhatshazwa kwenkqubo yomsebenzi, igunya eliphantsi labasemagunyeni ... Ziziphi izizathu kuzo zonke kwaye zeziphi izisombululo?
"Yintoni enqongophalayo kweli hlabathi ngoku ayikho iinkokheli zamakhosikazi, kodwa kunokuba iinkokeli ezinokubakhokela njengabesifazane" - inqaku elincomekayo elenziwe ngabaqeqeshi abashishini abakhulu kakhulu eNew York, uSimon Sineka.
Iimpawu eziqhelekileyo zokuziphatha zifundiswa kwishishini. Ngale ndlela, bafundisa kunye nabasetyhini ukukhokela amadoda. Qaphela konke! Landela i-instincts yakho, i-instincts yakho. Yaye ukuba isidalwa sakho sichaza ukuba kufuneka ubeke ingqalelo kumntu, uncedo, ukukhawuleza, ubonise inxaxheba-nokuba ngaba "amanani e-statistical" yenkampani ayilungile, kungcono ukuthatha ixesha kubasebenzi bakho.
Enyanisweni, iingcali ezininzi zithi abafazi bavame ukuba nethuba lokunyamekela okwenziwe ngokubaluleka ngakumbi kwiindawo ezihamba phambili. Ngenxa yokuba abafazi bathanda ukugxininisa ngakumbi abantu kune-natsifry, kwaye ngenxa yoko banokukhathazeka kwaye baquka nayiphi na ingxaki yeqela.
Nazi iindlela ezintathu abaqeqeshi bezoqoqosho abacebisa ngazo abarhwebi, abesilisa nabasetyhini. Ezi ngcebiso ziya kukunceda ube ngumkhokeli ongcono. Ngoko:
1) Sungula umbono ocacileyo wengxaki
Ukuba ufuna abantu baqonde ngokuchanekileyo iimfuno kunye neenjongo zakho, kufuneka bacacise, bacacise kwaye baqondwe. Kukulungele ukubeka iingcinga zakho ngamazwi. Emva koko, xa ufunda eli phepha kubasebenzi bakho, ungaqiniseki ukuba baya kuba nomfanekiso ocacileyo kwiintloko zabo.
Iimetriki zibaluleke kakhulu ekukulingeni ukukhula kwenkampani, ukuchonga indawo yayo kwimarike. Kubaluleke kakhulu kumbono wenkqubela phambili kwenkampani ngokubhekiselele kwiinjongo zayo eziphambili. Kodwa khumbula ukuba kufuneka ube nombono wakho wokuxazulula iingxaki kunye nesicwangciso sakho sokunqoba ezi ngxaki.
2) Khumbula ukuba ukuzincama nakho kudlule
Cinga ngeenkokeli ezifana nabazali okanye abaqeqeshi abaqhayisa ngabantwana babo, iintsapho zabo. Kubasebenzi abaqhelekileyo, ezininzi iingcali zicebisa ukuququzelela umsebenzi onomsebenzi ngeendlela ezithile kunye nobuchule. Ngokomzekelo, ukomeleza unxibelelwano phakathi kwabaphathi bomqeshwa? I-model ye-Western isinika indlela yokuphuma kwimeko, njengokubeka isikhundla somphathi wakho nomzali okhuselekileyo okanye utitshala onobulumko: "Ndiya kusebenza nzima kuwe. Kwaye xa usuka ukuza kufeza izinto ezintle, ndiza kuzingca ngokuba ndiyiluncedo "... Njengoko sibona, ukuba ummeli wezizwe zaseSlavic le ndlela ayisebenzisekanga ngezizathu ezininzi.
Kubalulekile ukuqonda ukuba ubunkokheli akukona nje ukuzingca kubasebenzi bakho nokubonelela ngeenjongo eziqhelekileyo ezifikelelekayo. Kumele ubeke abasebenzi bakho kuqala phambi kokuthanda kwabo!
Ukuba ufuna ukusebenzisa inkokheli, hlawula ixabiso. Yaye intlawulo ngumdla. Ukuba awulungele ukuzidela ngenxa yokuqokelela, awufanelanga ilungelo lokukhokela. Abasebenzi bavame ukuziva bekhuselekile emsebenzini emsebenzini. Bayazi ukuba umphathi uya kusikela ngokukhawuleza umsebenzi kunokuba nexesha lakhe lokufumanisa isizathu, oko kukuthintela umqeshwa ukuba azame ukuzichaza.
3) Yisebenzise amandla akho ukuthetha nabathengi nabasebenzi
Ukuthumela isayinwe yecomputer ukuba umntu usebenza kakuhle, kwaye umntu ungalunganga, ngokuqinisekileyo, akasebenzi. Kunoko, hamba kubasebenzi bakho uze ubatshele ukuba yintoni umphumo okulindele ukufumana. Ndikholelwe, eli xesha lichithwa liyakusindisa uluhlu olumangalisayo lwexesha lakho elizayo.
I-intanethi kunye ne-imeyile yindlela efanelekileyo yokusazisa ulwazi, kodwa abakwazi ukubonisa iimvakalelo, izimvo kunye nokugxeka okukhawulezayo. Ngokubanzi, fumana ixesha kunye namandla okunxibelelana nabasebenzi bakho. Oku kuya kuqinisa ubudlelwane kwishishini kwaye kuqinise amandla akho njengenkokeli.
Ngaloo ndlela, unokwenza isigqibo sokuba ukuba ube yinkokeli yangempela, kufuneka ulungise ubudlelwane obunxulumene nabasebenzi kunye nokuseka ithemba kwiqela.
Imisebenzi ethandwa kakhulu kwixesha elizayo
Imiba yomsebenzi osekude
Ukulungela # 1: iintsuku zomsebenzi
Ukusebenza kubaselula ehlobo - apho ufumana khona umsebenzi?
Qinisekisa isitala somphathi wekhanda, yintoni elindele wena kwinkampani
Iingcebiso: indlela yokuziphatha ngokuchanekileyo kwingxoxo-ndlebe
Ukunyamekwa kwamehlo kunye nekhompyutha
Kissel kusuka kwi-cowberries
Kutheni abantu bethembisa kwaye bangayigodli isithembiso?
Umphumeleli we-Eurovision 2016 - Jamala: i-biography, ubomi bomntu kunye nosapho lomculi, ifoto
Ukuyikratshi: Izinto zobugcisa ezenziwe ngezandla zaseHalloween ngezandla zakho
Yintoni enokuyenza ukuze enze ukuba avume uthando lwakhe
Iintlobo ezinomdla kubantwana abaselula
Izikhonkwane ezihle ezigqithisiweyo kunye nemidwebo kubo
Isisiseko sokutya kosher